Kooxo hubeysan oo Haween iyo Carruur badan Afduubtay | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha DibadaKooxo hubeysan oo Haween iyo Carruur badan Afduubtay
Kooxo hubeysan oo Haween iyo Carruur badan Afduubtay
29th August 2019 Arimaha Dibada, Wararka Maanta 0
Kooxo hubeysan ayaa tobaneeyo haween iyo carruur ah ku afduubtay weerar ay ku qaadeen xaafad ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria, sida ay sheegeen saraakiil iyo dadka deegaanka.
Qiyaastii 100 nin oo hubeysan islamarkaana ku socda mootooyin ayaa ku xoobmay xaafadda Wurma ee gobolka Katsina, goor dambe oo maalintii isniinta ahayd, ayaga bililiqeystay kadibna ka watay qaar ka mid ah dadka deegaanka.
“Markii hore waxaa la afduubtay 42 qof, hase yeeshee sideed ka mid ah ayaa soo baxsaday oo kusoo laabtay guryahooda” waxaa sidaas yiri Jabir Tsauri, oo ah maamulaha siyaasadda ee degmada.
Waxa uu sheegay in illaa iyo hadda la la’yahay 33 isugu jira haween iyo caruur, iyo hal nin.
“Burcadda ayaa waxa ay billaabeen inay xiriir lasoo sameyaan qoysaska dadka ay haystaan islamarkaana weydiistaan madax furasho” ayuu yiri Tsauri.
Waqooyiga Galbeed ee Nigeria ayaa dhowaanahan waxaa ka jiray afduubyo sii kordhayey iyo rabshado ay dowladda ku eedeysay burcad hubeysan.
Daawo Sawirro:-Halkee ayuu Caawa Madaxweyne Xaaf ku hoyanayaa?
Akhriso:-Sababta Maanta loo fasaxay Shaqaalaha dowladda Soomaaliya?